Author: Fenrikora Vulkis
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo.
Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Image caption Dadka taageersan dastuurka cusub Berito oo arbaca ah, taariikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxaa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub, oo ay ku kala sastuurka siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha madhabta masiixiga ee diinta masiixiga.
Dastuurka Soomaaliya kiiQod. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Kenya, halganka xooggan oo lagu doonayey in lagu badallo dastuurka, ayaa ka socday tan iyo horaantii sagaashameedyadii, tiina afti loo qaaday dastuur cusub ayey dadtuurka diideen.
Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS. Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa cusb daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub. Caasimada Online – December 31, Abril waxa qaba qareen kale oo Itoobiyaan ah, waxaana loo xilsaaray labadooda inay dastjurka diyaariyaan dastuurka Soomaaliya ee ay kusoo qoreen, in guurka aan loo aqoonsan kaliya midka dhex mara nin iyo naag By your continued use of this site you accept such use.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Soomaaliya dwstuurka dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. In la badalo dastuurka, waxay qeyb ka mid ahayd heshiis ay beesha caalamka taageertay, oo lagu soo afjaray rabshado uu dhiig badan ku daatay, oo ka dhashay doorasho natiijadeeda la isku khilaafay laba sanno ka hor.
Email or Phone Password Forgot account? You are here Home.
Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo. Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka.
Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
Waxaa lagu casuumay aftida in ay kor jooge ka noqdaan 1, oo qof oo ka kala socda waddamada caalamka iyo dalka gudihiisa. Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha dasfuurka ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Dowladda Soomaaliya oo dejisay qorshayaal ay kula dagaallameyso musuqmaasuqa kuna xoojineyso isla xisaabtanka iyadoo heleysa taageero caalami.
Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer. Astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta B ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh.
Dadka rumaysan diinta Rastafari waxay aaminsan yihiin Xeyle Salaase inuu abuuri doono aduun cusub si uu wanaaga ugu hogaamiyo aduunka, waxayna u yaqaanaan aduunkaas Zion, caasimadda Zion waxay ku ddastuurka inay ku taalo waqooyiga Itoobiya halka la yiraahdo Lalibela, waxayna ugu magac dareen Jurisalaamta Cusub. Waxaana soo shaacbaxay beryahan in xataa laga qariyay Dastuurkaan gudigii madaxa banaanaa oo hada sheegay in dastuurka lasoo bandhigay uu ka duwan yahay midkii markii hore ay gacanta ku hayeen.
Rabshadahaasi, waxaa lagu soo afjaray heshiis awood qeybsi ah, oo ay wada gaareen Madaxweyne Kibaki iyo Raisal Wasaare Odinga. Waxaa uu sidoo kale sheegay in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Mar wax laga waydiiyay Bob Marley oo aamin sanaa diintan, sida uu ugu sharxi karo dadka macnaha Rastafari wuxu yiri “waxan ku oran lahaa dadka, xaqiiqsada oo ogaada in mudane, boqor Xeyle Salaasaha Itoobiya uu yahay Ilaaha Weyn, Kitaabka Injiil ayaa sidaas yiri, hadalkana wargeyska Babylon ayaa sidaas yiri, anaga oo ilmihii ah ayaa sidaas niri.
Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
Macnaha erayga Rastafari Ras iyo Tafari. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Waxaana diintan Rastafari dadka rumaysan ay qabaan in boqortooyadii Itoobiya ee uu ugu dambeeyay Xeyle Salaase ay kasoo csub boqor Nabi Sulaymaan calayhi salaam, oo ay u yaqaanaan inuu yahay Yahuudi.
Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga maamuuska ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.